Papa ku'saabsan taxanaha Facebook
Papa ku'saabsan taxanaha Facebook waa ciyaar ka soo King, ee horumarinta of Candy burburin iyo Butros Rescue taxanaha.
Ujeeddada cayaarta waxa ay tahay in ay ku caawiyaan dib u soo booda Papa ku'saabsan oo dunida ah si yaab leh somaanta ee biin Maalmihii, degayo iyo chilies waalan. Waxaad u baahan tahay iftiimin ilaa dhammaan baaldiyo ay xagga hoose ee shaashadda. Iyada oo qorshe taxaddar leh iyo dooneysa waxaad samayn kartaa ugu tamar buu u ballaadhan yahay Papa ku'saabsan ee. Beat saaxiibadaa si ay dhibcaha ugu wanaagsan in ka badan 100 madadaalo, Heerarka Maalmihii iyo galbed ee adag.
Waa la qabatimo si degdeg ah oo xiiso weyn!